FANANGANANA NY TETIKASA TANAMASOANDRO : Nandefa iraka manokana nifampidinika tamin’ny vahoakan’Ambohitrimanjaka ny fitondram-panjakana
Nidina ifotony, tonga niresaka tamin’ny mponina eny Ambohitrimanjaka sy ny manodidina ny tompon’andrikitry ny tetikasa Tanamasoandro, omaly. 23 octobre 2019
Nitarika izany ny teo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika izay nahitana an’i Gerard Andriamanohisoa, Augustin Andriamananoro, ny Tale Jeneralin’ny Apipa ary ny avy eo anivon’ny minisiteran’ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy. Nisy ny dinidinika nifanaovan’ireto Delegasiona ireto tamin’ny fokonolona teny an-toerana ary nandritra io koa no nanazavan’izy ireo ny dingana rehetra efa nolalovan’ny fanjakana.
Niaiky ny mponina ao Nosibe Zaivola fa tsara ny tetikasan’ny Filoham-pirenena no sady azo tanterahina tsara saingy tokony hisy hatrany, hoy izy ireo, ny fifampiresahana eo amin’ny vahoaka sy ny mpitondra amin’ny fanatanterahana izany. Io fifampiresahana io no nambaran’izy ireo fa tsy ampy sy lesoka ka nahatonga ny korontana sy savorovoro madinika nitranga. Nangatahan’ireto mponina ireto moa ny mba hananganana birao maharitra hifandraisan’ny mponina sy ny vahoaka eny Ambohitrimanjaka. Tetsy ankilan’ izay, nanamafy ireto delegasiona manokana iraka avy amin’ ny fitondram-panjakana ireto fa tsy misy asa azo atomboka raha tsy vita ny fifampiresahana amin’ny mponina, indrindra ireo voakasiky ny fanotofana. “Tamin’ny fo tony, fo mazava no nifampiresahana tamin’ny mponina teto androany. Nisy tamin’izy ireo no olon-tsotra, Ray aman-dreny ary Raiamandreny ara-drazana. Heveriko fa hitohy hatrany ny fifampiresahana ary tsy misy tsy vitan’ny fifampiresahana. Azo atao foana ny mifanakalo hevitra ary tsy misy fetra io fifanankalozan-kevitra io”, hoy ny fanazavan’i Pierre Houlder.
Mbola nohamafisiny koa fa tombotsoam-bahoaka no hananganana ity tetikasa ity ka tsara raha mandry sy milamina avokoa ny zavatra rehetra vao atomboka ny asa. “Ny zavatra tiana hatao dia zavatra tsara, rehefa te hanangana zavatra tsara dia aleo mipetrapetraka tsara avokoa ny fandaminana rehetra, tsy hisy tany hototofana izany raha tsy misy ny fifampierana”, hoy hatrany ny fanazavany. Nohazavain’izy ireo koa fa ny fananganana tanàna vaovao dia efa fanao amin’ny tanàn-dehibe rehetra manerana an’izao tontolo izao. Tsy vao izao rahateo no nisy ny fanotofana tany nataon’ny fanjakana fa efa hatramin’izay mihitsy. Na Isotry, 67ha, Ampefiloha sy ny manodidina aza dia tany nototofana avokoa ireny, hoy ny hatrany ny fanazavanr’i Pierre Houlder
Voahaja avokoa izay voalazan’ny lalàna
Ankoatra izay, nitondra fanazavana koa ny teo anivon’ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany fa nanaraka izay voalazan’ny lalàna tanteraka ny fananganana ny tetikasa Tanamasoandro eny Ambohitrimanjaka. Araka ny fanazavana hatrany, ny 04 jona 2019 lasa teo no voalaza fa nivoaka ny didim-pitondrana laharana : 11 358 / 2019-MAHTP mametra ny fisokafan’ny famotopotorana ara-pitondran-draharaha mikasika ny maha mety na tsia ny andrasana amin’ny alalan’ny raharaham-pihavanana, na amin’ny alalan’ny fanesorana amin’ny tompony ny taniny noho ny antony fanasoavam-bahoaka.
Ny dingana voalohany tamin’io dia natao tao amin’ny boriborin-tany faha6 kaominina Antananarivo Renivohitra, Kaominina Ambanivohitra Ambohidrapeto, Kaominina Ankadimanga, Kaominina Fiombonana, Kaominina Itaosy sy Kaominina Fenoarivo ao amin’ny Distrika Antananarivo Atsimondrano ary tao amin’ny Kaomina Ambanivohitra Ambohitrimanjaka Distrikan’Ambohidratrimo, Faritra Analamanga.
Fanadihadiana momba ny toerana sy ny tontolony
Tamin’ny 04 jona 2019 kosa no nanomboka ny « études Géotechniques, hydrauliques et environnementales » ary natao peta-drindrina teny amin’ny biraon’ny kaominina sy distrika voakasika ny filazana ny fanombohan’ny fisokafan’ny famotopotorana nanomboka ’ny 14 jona 2019. Ny 15 jona 2019 ihany dia nivoaka ny tatitra vonjy maika momba ny « Etudes Géotechniques, Hydrauliques et Environnementales » ary ny 17 jona 2019 ka hatramin’ny 17 jolay 2019 ny faharetan’ny famotopotorana ka nahafahan’ny vahoaka voakasika nametraka ny fitsipahana na fitarainana na koa soso-kevitra mikasika ny tetikasa. Nanomboka ny 18 jolay kosa indray ny fandinihina sy famakafakana ny antontan-kevitra vokatry ny famotopotorana, antontan’isan’ireo nametraka hevitra, antontan’isan’izay nanao fanoherana, antontan’isan’izay nanao fanekena ary ny antontan’isan’ireo nanao soso-kevitra mahakasika ny tetikasa. Ny 14 aogositra 2019 lasa teo kosa no nivoaka ny didy laharana 2019-1546, manambara ny ho fanasoavam-bahoaka ny fanorenana ny tanàna vaovao « Tanamasoandro. »
Vaomiera hanao tombana ny tetikasa…
Napetraka taorian’ireo koa ny fangatahana ny hananganana ny vaomiera ara-panjakana hanao ny tombana ny tetikasa, nivoaka taorian’izany ny tatitra ary ny 26 septambra 2019 natolotra ny ONE (Ofisy nasionaly momba ny tontolo iainana) ny tatitra farany mahakasika ny « Etudes Géotechniques, Hydrauliques et Environnementales ».
Ny 1 oktobra lasa teo kosa indray no napetraka ny fangatahana fananganana vaomiera manokana momba ny fanaovana tombana ho an’ny boriborin-tany faha6, fokontany Anosibe Zaivola ary ny 3 oktobra no nalefa ny fiantsoana ny olona handrafitra izany vaomiera izany. Nidina tao amin’ny fokontany Anosibe Zaivola ny vaomiera tamin’ny 08 oktobra 2019 nanao ny tombam-bidin’ny trano sy ny tany voakasiky ny fanotofana. Araka ny fanazavana hatrany, efa vita avokoa amin’izao ny fanaovana tombam-bidin’ny trano sy ny fotodrafitrasa ao amin’ny boriboritany fahaenina ary mbola mitohy hatrany ny fakan-kevitra sosialy mba hahafahana mandrafitra ny « Plan d’Action de Réinsertion » ho fitsinjovana ny mponina eny an-toerana. Nambaran’ireto delegasiona iraky ny fitondram-panjakana ireto fa raha ireo dingana ireo no arahina dia voahaja tanteraka izay voalazan’ny lalàna mahakasika ny hananganana ny tetikasa Tanamasoandro ao Ambohitrimanjaka.